Semalt ले मार्केटिंग क्यालेन्डरका फाइदाहरू र 2021 मा यसका सुविधाहरूबारे बताउँछ
२ बजार क्यालेन्डर भनेको के हो?
।। तपाइँको मार्केटिंग क्यालेन्डरमा तपाइँलाई के चाहिन्छ
I तपाईंको काम एजेन्डा (व्यापार सम्बन्धित कार्यहरू)
II। संगठनात्मक ट्याब
III टेक्नोलोजी आधारित उपकरण डिजिटल पात्रोहरूका लागि
IV। कार्यहरूको लागि कार्य योग्य समय-फ्रेम
।। मार्केटिंग क्यालेन्डर प्रयोगका फाइदाहरू
III प्रमोशनल अवसरहरू
IV। ग्राहकहरु/ग्राहकहरु संग सुधारिएको सगाई
V. ट्र्याक र मोनिटर मार्केटिंग प्रगति
।। तपाइँको २०२१ मार्केटिंग क्यालेन्डरमा सुरू गर्दै
I कस्टम-मेड वा छैन?
II। लगातार पात्रो लेआउट र ढाँचा
III संगठित क्यालेन्डरको महत्व
IV। क्यालेन्डर डिजाइन
यो समय पुरानो वर्षलाई बिदाइ दिन र नयाँ साललाई स्वागत गर्ने समय हो - २०२१। २०२१ मा तपाईले आफ्नो व्यवसायमा माथि रहन रणनीतिक चालहरू गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंसँग सुरुबाट नै स्पष्ट योजना छ भने, तपाईं नयाँ वर्षमा फस्टाउनको लागि आगामी जुनसुकै प्रबन्ध गर्नका लागि तयार हुनुहुनेछ।
मार्केटिंग क्यालेन्डर प्रयोगले तपाईंलाई घटनाहरू ट्र्याक गर्न र मार्केटिंग चालहरू योजना गर्न मद्दत गर्दछ; यस तरीकाबाट, तपाईं आफ्नो खेलमा अगाडि रहन सक्षम हुनुहुनेछ। मार्केटिंग क्यालेन्डरले तपाईंलाई राम्रो परिभाषित मार्केटिंग रणनीति अनुसरण गर्न मद्दत गर्दछ। यस मार्फत, तपाईले एउटा त्यस्तो ब्रान्डको विकास गर्न सक्नुहुनेछ जुन व्यक्तिले पहिचान गर्दछ र विश्वास गर्दछ, एक ब्राण्ड जसले उच्च राजस्व उत्पन्न गर्दछ।
यसबाहेक, ठाउँमा रहेको पात्रोले तपाईंलाई लक्ष्यमा रहन मद्दत गर्दछ। तपाई नयाँ ग्राहकको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ वा अर्को पृष्ठमा तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर पत्ता लगाई रहनु भएको छ, तपाई क्षितिजमा हुने घटनाहरूलाई छिटो पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँ तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू के हुँदैछ भनेर पनि अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
एक डिजिटल पात्रो तपाईंको जीवन सरल बनाउन को लागी एक शानदार तरीका हो। तपाईं कागजमा वा अनलाइन सबै योजना बनाउन सक्नुहुन्छ र घटनाहरू र गतिविधिहरू ट्र्याक गर्न यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईं डेडलाइन वा अन्य महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनहरू सम्झनुहुन्न। यस पोष्टमा, तपाईं आफ्नो 2021 मार्केटि calendar क्यालेन्डरमा तपाईंको आवश्यक सबै व्यवसाय लक्ष्यहरू पुग्न सबै सिक्दै हुनुहुन्छ।
२. मार्केटिंग क्यालेन्डर भनेको के हो?
मार्केटिंग क्यालेन्डर लगभग सबै संस्थामा प्रभावी मार्केटिंगको लागि एक आवश्यक उपकरण हो। यो एक तालिका हो जुन आउँदो बर्षका लागि तपाइँका सबै मार्केटिंग गतिविधिहरू, साथै सबै कुराको लागि समयरेखा र समयसीमा विवरण दिन्छ।
यो पनि पहिचान गर्दछ कि तपाईं वा तपाईंको फर्मले कसरी यसको सन्देश संचार गर्दछ वा लक्षित डेमोग्राफिकमा यसको उत्पादनहरू र सेवाहरूको प्रचार गर्दछ। संक्षेपमा, यसले तपाईंको कम्पनीको मार्केटिंग रणनीति र लक्ष्यहरूसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू र गतिविधिहरूको विवरण दिन्छ।
What. तपाईको मार्केटिंग क्यालेन्डरमा तपाईलाई चाहिने कुरा के हो
२०२१ मा तपाईंको मार्केटिंग लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु भनेको सबै योजनाको बारे हो। यो अगाडि बाटो बिछ्याउने र समयरेखा अनुसार सबै गतिविधिहरू र घटनाहरूको म्यापि .को बारेमा हो।
यदि तपाईं वास्तवमै २०२१ मा तपाईंको व्यवसायमा पनि बिच्छेदन चाहनुहुन्छ भने, आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। कुन घटनाहरू तपाइँ तपाइँको ग्राहक आधार बढाउन र तपाइँको वित्तीय लक्ष्य पूरा गर्न आयोजित गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं कुन अधिवेशन र व्यापार कार्यक्रमहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ? तपाइँ कुन समुदाय गतिविधि र चाड़हरूको प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ?
यी प्रश्नहरूको उत्तरहरूले तपाईंलाई यो निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाईं अर्को बर्षमा के गर्नु पर्ने हुन्छ। र होईन, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यी सबै तपाईंको मार्केटिंग क्यालेन्डरमा उनीहरूको बाटो फेला पार्दछ। यस क्यालेन्डरले तपाइँको बजार रणनीतिहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्दा तपाइँको प्रगति ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। यहाँ छ कि तपाइँको २०२१ मार्केटिंग क्यालेन्डरमा के हुनुपर्दछ।
I. तपाईको कार्य एजेन्डा (व्यापार सम्बन्धित कार्य)
तपाईको क्यालेन्डरमा पहिलो चीज चाहिन्छ तपाईको कार्यको लागि एजेन्डा हो। तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित काम पहिलो वस्तु सूचीबद्ध हुनुपर्दछ। यो छोटो हुनुपर्दछ, तर यसले तपाईंले दैनिक गर्नुहुने कार्यहरूको विवरण दिनुपर्दछ। यी कर्तव्यहरू तपाईंको मार्केटिंग रणनीतिहरूसँग सम्बन्धित कार्यहरूको रूपमा सूचीबद्ध हुनुपर्छ जुन तपाईंले नियमित रूपमा राख्नै पर्छ।
यदि यो गडबड छ भने एक व्यावहारिक क्यालेन्डर को उपयोग के हो? त्यसो भए, तपाईको २०२१ मार्केटि calendar क्यालेन्डरमा संगठनात्मक ट्याब समावेश गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको क्यालेन्डरलाई मद्दत गर्दछ र यसमा समावेश कार्यहरू व्यवस्थित देखिन्छ। यदि तपाईं विविध ग्राहकहरू, विभागहरू र टोलीहरूसँग काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको क्यालेन्डर प्रत्येकलाई सजिलो संचार र कार्य अनुगमनको लागि नामित र राम्रोसँग लेबल गरिएको ट्याबहरू हुनुपर्दछ।
तपाईको ई-क्यालेन्डरमा के चाहिन्छ टेक्नोलोजिकल-आधारित उपकरणहरू हुन् जसले तपाईंको पात्रोलाई अनुकूलित, विस्तृत र व्यवस्थित राख्न मद्दत गर्दछ। केही उपकरणहरूमा तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ पीपीटीहरू, बुलेटिनहरू, र कागज पानाहरू सजिलो सन्दर्भको लागि सूचीबद्ध कार्य सूची सहित। तपाईंको पात्रो जति अधिक टेक्नोलोजीमा आधारित छ, तपाईंको सबै आवश्यकताहरू सम्हाल्नको लागि त्यति प्रभावकारी हुनेछ।
IV। कार्यहरूको लागि कार्य योग्य समय-सीमा
२०२१ को लागि तपाईंको मार्केटिंग क्यालेन्डर "यो" होईन यदि यसले विविध कार्यक्रमहरूको समय साथै कार्यहरू र कर्तव्यहरूको लागि टाइमफ्रेम समावेश गर्दैन जुन तपाईंले म्याप गर्नुभयो। सबै चीजको लागि समयको विस्तारले तपाईंलाई कुशल रहन मद्दत गर्दछ।
Marketing. बजार क्यालेन्डर प्रयोगका फाइदाहरू
आज तपाईलाई पाउन सक्ने सबैभन्दा आवश्यक मार्केटिंग उपकरण मध्ये एक तपाईंको क्यालेन्डर हो। यो सबै व्यवसायहरूको लागि हुनुपर्दछ किनभने यो तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूको विज्ञापन गर्ने एक प्रभावकारी माध्यम हो। यदि तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि प्रभावकारी क्यालेन्डर सिर्जना गर्न सुरू गर्नुभएको छैन भने, तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि धेरै अवसरहरू हराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ अब तपाईंको व्यवसायको लागि प्रभावकारी क्यालेन्डर सिर्जना गर्नका केही फाइदाहरू छन्।
I. समय दक्षता
मार्केटिंग क्यालेन्डर तपाईका कार्यहरू, बैठकहरू र घटनाहरूको ट्र्याक राख्न सजिलो सुविधाजनक तरीका हो। यसले तपाईंलाई कामको प्रबन्धन योग्य अंशहरूमा भाँच्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईं दिनको एक विशेष समयमा गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई के गर्नुपर्दछ र कहिले पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ; यो धेरै व्यक्तिको लागि प्रमुख समय-बचतकर्ता हो।
एक मार्केटिंग पात्रो पनि तपाइँ तपाइँको योजना को योजना को लागी र तपाइँको अभियान को प्रगति को ट्रैक राख्न को लागी अनुमति दिन्छ। यसले तपाईलाई ठूला कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। एक नियमको रूपमा, ठूलो र अधिक विस्तृत तपाईंको क्यालेन्डर, उत्तम।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईंसँग एक मार्केटिंग अभियान छ कि एक ठूलो ईमेल सूची निर्माण मा केन्द्रित छ, तपाईं निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईं प्रत्येक मेलिंग को लागी मितिहरू सेट गर्नुभयो। यो तपाईं लक्ष्य मा लक्ष्य मा रहन र लक्षित छैन कि मेलिंग सूचिको मा पैसा र संसाधनको खेर फाल्नबाट तपाईंलाई बचाउन मद्दत गर्दछ।
क्यालेन्डर हुनुले तपाईंलाई लचिलो बनाउँछ, किनकि यसले तपाईंलाई तपाईंको समय र गतिविधिहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। किनकि अब तपाईं आफ्नो प्लेटमा प्रति समय कर्तव्य र गतिविधिहरूको ट्र्याक राख्न सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईं योजनाबद्ध नगरेको अन्य गतिविधिहरूमा ठीक गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। क्यालेन्डर जस्तो मार्केटि tool उपकरणले पनि तपाईंलाई अभियानहरू योजना गर्न, अभियानहरूको प्रगति ट्र्याक गर्न, र तपाईंको मार्केटि marketing रणनीतिको प्रभावकारिताको मूल्या help्कन गर्न मद्दत गर्दछ।
सबै व्यवसायहरू आफ्नो ग्राहक आधार बढाउन चाहन्छन्। यद्यपि लक्ष्य बजारमा पुग्न सफलतापूर्वक धेरै समय, पैसा र प्रयास लिन्छ। यस कारणका लागि, धेरै संस्थाले मासिक थिमहरू सिर्जना गरेर वा उनीहरूको मार्केटि campaigns अभियानहरूको फोकस परिवर्तन गरेर वर्षभरि एक वा दुई कुञ्जी शब्दहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न बढी सक्रिय मार्केटिंग दृष्टिकोण अपनाउन शुरू गरिरहेका छन्।
जब तपाईं आफ्नो क्यालेन्डर योजना गर्नुहुन्छ, तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि वरपर धेरै प्रचार अवसरहरू छन्। तपाईंको व्यवसायलाई बढाउनको लागि विविध अवसरहरूलाई वेवास्ता गर्न सजिलो छ यदि तपाईंसँग समय र गतिविधिहरू योजनाबद्ध छैनन् भने। तर एक संगठित समय तालिकाको साथ, तपाईले व्यवसाय विकास अवसरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको बाटोमा आउँदछन्।
मार्केटिंग क्यालेन्डर पनि तपाइँको ग्राहकहरूलाई नियमित रूपमा जाँच गर्ने र उनीहरूको मार्केटि campaigns अभियानहरू अपडेट गर्ने बानीमा आउनको लागि एक उत्तम तरिका हो। यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंलाई तपाईंको व्यवसायमा के हुँदैछ लक्ष्यको साथ राख्दछ र तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्नको लागि अनुमति दिन्छ।
यसले तपाइँलाई अर्कोमा के काम गर्ने भनेर जान्नको लागि म्याद दिन्छ, र तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको पाठकहरु संग साझा गर्न को लागी नयाँ सामग्री छ।
मार्केटिंग क्यालेन्डरले तपाईंलाई तपाईंको मार्केटिंग गतिविधिहरू ट्र्याक राख्न र बिक्री, अर्डरहरू, र यस्तै अन्यहरूको संख्या रेकर्ड गर्न मद्दत गर्दछ।
अधिक, क्यालेन्डरले तपाईंलाई हप्ताको प्रत्येक दिनको लागि तालिका सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यो क्यालेन्डर योजनाको लागि र कार्यहरूको प्रत्येकको प्रगति ट्र्याक गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैले, तपाई सजिलैसँग कार्यको प्रत्येक रिपोर्ट हेर्न र वास्तविक समयमा तपाईंको व्यवसायको प्रगति विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ।
Your. तपाईको २०२१ मार्केटिंग क्यालेन्डरमा सुरूवात गर्दै
I. कस्टम-मेड वा छैन?
तपाईंको व्यवसायको लागि मार्केटिंग क्यालेन्डर तयार गर्ने बारेमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईं कस्तो प्रकारको क्यालेन्डर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नु हो। यदि तपाईंसँग एक मध्यम आकारको व्यापार छ भने, त्यसोभए तपाईं पेशेवर क्यालेन्डर लिने सोच्न वा अनुकूलन क्यालेन्डरको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। योसँग प्रिन्टिन्टेड पृष्ठहरू छन् जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ।
तिनीहरूसँग केवल समस्या यो हो कि उनीहरूसँग प्राय: धेरै जानकारी दिनको लागि धेरै कोठा हुँदैनन्, तर त्यो ठीक छ। यदि तपाईंसँग सानो व्यापार छ भने, तपाईं सजिलै आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै अनुकूलित क्यालेन्डर सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, जसले खर्चमा केही बृद्धि गर्दछ।
अर्को सचेत जानकारीको बारेमा तपाईंले सचेत हुनुपर्दछ कि तपाईंसँग तपाईंको पात्रोको लागि एक सुसंगत रूपरेखा र ढाँचा आवश्यक छ, अन्यथा तपाईं यसबाट अधिकतम प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। तपाईंको मार्केटिंग क्यालेन्डर पढ्न सजिलो र अनुसरण गर्न सजिलो हुनुपर्दछ, त्यसैले ती दुबै सुविधाहरू प्रदान गर्ने टेम्प्लेट खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। अवश्य पनि, तपाईको क्यालेन्डर जति अधिक पेशेवर हेर्ने हो, त्यति नै महँगो हुनेछ।
तपाईको मार्केटिंग क्यालेन्डरलाई संगठित राख्नुको महत्त्व बढी हुन सक्दैन। न केवल तपाईको प्रगतिको ट्र्याक राख्नका लागि तपाईलाई आवश्यक छ, तर यसलाई गन्दाबाट बचाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं अर्को हप्ताको लागि कुन दिन निर्धारित गर्नुभएको छ, साथै त्यस हप्ताको लागि तपाईंले के योजना बनाउनुभयो भनेर हेर्नको लागि तपाईं सक्षम हुन चाहनुहुन्छ। तपाईको क्यालेन्डरमा प्रत्येक दिनको एक संक्षिप्त विवरण, साथै तपाईं त्यस दिनमा के गर्नुहुनेछ भनेर छोटो नोट समावेश गर्न यो उपयोगी छ। तपाईको क्यालेन्डरको बारेमा सबै कुरा तपाईको इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सहि ढ .्गले संगठित हुनु पर्छ।
तपाईंले आफ्नो क्यालेन्डरका लागि उपयुक्त डिजाइन छनौट गर्नुपर्छ। यो डिजाईन चयन गर्न महत्वपूर्ण छ जुन आकर्षक मात्र होइन तर उपयोगी र विभिन्न प्रकारका व्यवसायका लागि कार्यशील छ। क्यालेन्डर सबै कार्यक्रम र गतिविधिहरू समायोजन गर्न पर्याप्त लचिलो हुनुपर्छ। क्यालेन्डरमा बिभिन्न फन्ट, शैली र र use प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ।
जे होस्, तपाईंको मार्केटिंग अभियानको लागि क्यालेन्डर डिजाइन गर्दा, केहि चीजहरूको ख्याल राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको कम्पनीको सबै आवश्यक जानकारी र तपाईको ब्यापारको प्रकृति जस्तै कम्पनीको नाम, सृष्टिको उद्देश्य, ईमेल ठेगाना, सम्पर्क नम्बरहरू आदिलाई एकै ठाउँमा राख्न सल्लाह दिइन्छ। यसले तपाईंको ग्राहकहरूको लागि पहुँच र क्यालेन्डर प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ।
मार्केटिंग क्यालेन्डरहरू तपाईको व्यवसायलाई अझ राम्रोसँग चलाउन मद्दत गर्दछ तपाईलाई बिहान जब तपाईले बिहान आँखा खोल्नु हुन्छ केही दिन को लागी तपाईलाई केहि दिई। जब तपाईको अफिसमा तपाईको प्रभावी क्यालेन्डर हुन्छ, तपाईको ल्यापटप वा फोनमा तपाईले भेट्टाउनुहुनेछ कि तपाई समयमै काम गर्नका लागि बढि प्रेरित हुनुहुन्छ। यसले उत्पादकता बढाउनेछ, जसले फलस्वरूप बढी नाफा निम्त्याउँछ! तपाईंको मार्केटिंग क्यालेन्डर आफैं सिर्जना गर्नुको सट्टा, Semalt यसका साथ तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ। उनीहरूको सहयोगको साथ तपाईको क्यालेन्डर आकर्षक देखिने छैन तर कार्यात्मक र प्रभावकारी पनि हुनेछ।